आलेमगरको समर्थनपछि अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्दै ! « Ok Janata Newsportal
आलेमगरको समर्थनपछि अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बन्दै !
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् बागमती प्रदेश (दाहाल–नेपाल पक्ष) का संसदीय दलको नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई समर्थन जुट्ने देखिएको छ ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार शाक्यलाई पार्टी विभाजनपछि भने सफलता हात पार्ने निश्चित प्रायः भएको हो । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेशसभालाई बन्दी नबनाउने र सरकार बन्ने भएपछि समर्थन दिने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर सञ्चालनमा रहनेछ । कांग्रेसले कसलाई सहमति दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
हालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि कांग्रेसलाई रिझाउन व्यस्त देखिनुभएको छ । कांग्रेसको समर्थन नपाएपछि नेकपाको सरकार अल्पमतमा नै रहनेछ ।
पछिल्लो समय अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बामगती प्रदेशसभा सदस्य रमा आले मगरले पनि आफ्नो समर्थन दिने जनाएकी छन् । आलेलाई नेकपा केपी समूहले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो ।
तर, उक्त पद अस्वीकार गरेको उनले बताइन् । ‘मेरो बारेमा अनेक हल्ला चलाइयो । केही भ्रामक प्रचार पनि भयो । तर, मेरो समर्थन अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नै छ’, उनले भनिन् । आले काठमाडौं–१० (ख) बाट निर्वाचित प्रदेससभा सदस्य हुन् ।
उनले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेत गरेकी छन् । बागमती प्रदेशसभा बैठक आजबाट शुरु हुँदैछ । नेकपा विभाजित भएपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म ४९ जनाले शाक्यलाई समर्थन रहेको र मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था हुँदा थप चार जनाले आश्वासन दिएको यो समूहले दावी गरेको छ ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ८०, कांग्रेससँग २२, विवेकशील साझाका तीन र साना दलहरुसँग पाँच सांसद छन् ।